Manangan-tsaina, Mifidy, Manao Fanompoana Sivily | Fitiavan’Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Féroïen Ga Galoà Garifuna Goujrati Grika Groenlandey Guarani Guna Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Japoney Jula Kabiyè Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla Maorisianina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lhukonzo Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiché Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Urhobo Venda Vezo Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Fananganan-tsaina, Fifidianana, ary Fanompoana Sivily
Fananganan-tsaina. Miankohoka manoloana ny saina ny olona matetika, na manao fihetsika hafa toy izany, sady mihira ny hiram-pirenena na hira faneva hafa. Mitovy amin’ny hoe mivavaka izany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Toy ny hoe ny Firenena na ny mpitondra mantsy amin’izay no andrandraina hitondra famonjena, fa tsy Andriamanitra. (Isaia 43:11; 1 Korintianina 10:14; 1 Jaona 5:21) Eritrereto ny nataon’i Nebokadnezara, mpanjaka mahery tany Babylona. Tiany hiaiky ny vahoakany fa tena ambony izy ary mpivavaka be. Nampanao sary goavana àry izy, ary notereny hiankohoka teo ny vahoakany rehefa nalefa ny mozika, izay karazana hiram-pirenena ihany. Tsy nety niankohoka anefa ireo Hebreo telo lahy nantsoina hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego, na dia norahonana ho faty aza.—Daniela, toko faha-3.
Nilaza i Carlton Hayes mpahay tantara fa ‘ivavahana ny sainam-pirenena’ ankehitriny. Nanamarika izy hoe: “Miala satroka ny lehilahy rehefa ampandalovina ny saina. Manoratra tononkalo manindrahindra azy io koa ny poety, ary mihira momba azy io ny ankizy.” Nilaza koa izy fa toy ny “andro masina” ny fetim-pirenena, toy ny olo-masina ireo olo-mangan’ny firenena, ary toy ny “tempoly” ireo toerana anindrahindrana ny firenena sy ny marika amantarana azy. Hoy ny olona ambony tao amin’ny tafika brezilianina: ‘Ankamasinina sy ivavahana ny saina, toy ny ivavahana amin’ny Tanindrazana.’ Nilaza mihitsy Ny Rakipahalalana Amerikanina fa “masina sahala amin’ny lakroa ny saina.”
Nilaza koa io rakipahalalana io, tatỳ aoriana, fa “fomba hampisehoana fitiavan-tanindrazana” ny hiram-pirenena. “Matetika ny tonony no misy fangatahana tari-dalana sy fiarovan’Andriamanitra ho an’ny vahoaka na ny mpitondra.” Tsy diso àry ny Vavolombelon’i Jehovah raha mihevitra fa toy ny fivavahana ny fombafomba mampiseho fitiavan-tanindrazana. Anisan’izany ny fanaovana hiram-pirenena sy fananganan-tsaina. Nilaza ny boky iray momba ny mponina any Etazonia fa tsy nety nanome voninahitra ny sainam-pirenena ny zanaka Vavolombelon’i Jehovah, tany am-pianarana. Tsy nety nianiana koa izy ireo hoe tsy hivadika amin’ny tanindrazana. Hoy koa io boky io: ‘Niaiky ihany ny Fitsarana Tampony tamin’ny farany, rehefa nisy raharaham-pitsarana maromaro, fa fombafomba ara-pivavahana ireny fanao isan’andro ireny.’
Mihevitra an’ireny fombafomba ireny ho tsy araka ny Baiboly àry ny vahoakan’i Jehovah, ka tsy mandray anjara amin’izy ireny. Hajainy anefa ny zon’ny hafa hanao izany. Manaja ny saina koa izy ireo satria famantaram-pirenena izy io. Ekeny fa “manam-pahefana” ny fitondram-panjakana tafatsangana ara-dalàna, ary manao ny asany toy ny hoe “mpanompon’Andriamanitra” izy io. (Romanina 13:1-4) Mivavaka “ho an’ny mpanjaka ary ho an’izay rehetra mitana toerana ambony” àry isika. Nahoana? “Mba hananantsika fiainana tony sy milamina hatrany, ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra sy ny fahamendrehana tanteraka.”—1 Timoty 2:2.
Fifidianana. Manaja ny zon’ny olona hifidy ny tena Kristianina. Tsy manao fihetsiketsehana hisakanana ny olona tsy hifidy izy ireo, ary manaiky an’izay manam-pahefana voafidim-bahoaka. Tsy manao politika mihitsy anefa izy ireo. (Matio 22:21; 1 Petera 3:16) Inona àry no tokony hataon’ny Kristianina, raha ny lalàna no mitaky hoe tsy maintsy mifidy ny vahoaka, na lasa halan’ny olona izay tsy mandeha mifidy? Azony eritreretina ny nataon’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tonga tany amin’ilay lemak’i Dora izy ireo. Mety hanapa-kevitra ny hankany amin’ny biraom-pifidianana àry ny Kristianina iray, raha mamela azy ny feon’ny fieritreretany. Mila mitandrina anefa izy mba tsy homba ny atsy na ny aroa. Tokony hotadidiny ireto toro lalana enina ireto:
“Tsy anisan’izao tontolo izao” ny mpanara-dia an’i Jesosy.—Jaona 15:19.
Solontenan’i Kristy sy ny Fanjakany ny Kristianina.—Jaona 18:36; 2 Korintianina 5:20.
Mitovy ny zavatra inoan’ny tena Kristianina, ary miray saina izy ireo satria maneho fitiavana toy ilay nasehon’i Kristy.—1 Korintianina 1:10; Kolosianina 3:14.
Tompon’andraikitra amin’ny zavatra ataon’izay voafidy ilay nifidy azy.—Diniho ny toro lalana ao amin’ny 1 Samoela 8:5, 10-18 sy ny 1 Timoty 5:22.
Tamin’i Jehovah, dia toy ny hoe nanda azy ny Israelita, rehefa nangataka mpanjaka olombelona.—1 Samoela 8:7.
Tokony ho hitan’ny olona hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no tohanantsika. Ho sahintsika amin’izay ny hitory momba an’io Fanjakana io amin’ny olona rehetra, na inona na inona firehan-kevitra politika arahiny.—Matio 24:14; 28:19, 20.
Fanompoana sivily. Rehefa tsy mety manao raharaha miaramila ny olona any amin’ny tany sasany, dia asain’ny Fanjakana manao fanompoana sivily, izany hoe asa tsy misy ifandraisany amin’ny miaramila. Tokony hivavaka isika raha mila manapa-kevitra momba izany, ary angamba hiresaka amin’ny Kristianina matotra iray. Ny tari-dalan’ny feon’ny fieritreretantsika avy eo no arahintsika rehefa hanapa-kevitra.—Ohabolana 2:1-5; Filipianina 4:5.
Milaza ny Baiboly fa tokony “hankatò ny fanjakana sy ny manam-pahefana mpitondra” isika, ary “ho vonona ho amin’ny asa tsara rehetra” sy “hahay handanjalanja.” (Titosy 3:1, 2) Mila mitadidy an’izany isika sady mieritreritra hoe: ‘Sao dia misy ifandraisany amin’ny ady ihany na ny fivavahan-diso ilay fanompoana sivily asaina ataoko?’ (Mika 4:3, 5; 2 Korintianina 6:16, 17) ‘Mety ho sarotra amiko ve ny hanao ny andraikitry ny Kristianina na tsy ho vitako mihitsy, raha manao an’ilay izy aho?’ (Matio 28:19, 20; Efesianina 6:4; Hebreo 10:24, 25) ‘Sa ve mety hanam-potoana bebe kokoa hanompoana an’i Jehovah aho, na hanompo manontolo andro mihitsy angamba?’—Hebreo 6:11, 12.
Mety hanao fanompoana sivily ny Kristianina iray, mba tsy higadra. Tsy misy tokony hanakiana azy raha mamela azy hanao izany ny eritreriny. (Romanina 14:10) Tokony hanaja ny safidiny koa anefa ny hafa raha tsy te hanao an’izany izy.—1 Korintianina 10:29; 2 Korintianina 1:24.
Nenjehina ny Vavolombelon’i Jehovah satria tsy nety nanao miaramila. Imbetsaka anefa izy ireo no nisy nanampy, ary tsy ampoizinao mihitsy hoe iza izany.